ILANGA LOKUPHILA ECOAPARTMENTS - I-Airbnb
ILANGA LOKUPHILA ECOAPARTMENTS
Providencia and Santa Catalina Islands, San Andrés and Providencia, i-Colombia
Ikamelo e-ifulethi elisevisiwe ibungazwe ngu-Harold
Indawo yokuhlala enobuhlakani, ukungenisa izihambi kanye nenkonzo yokunethezeka, siyinkampani Enesibopho esinomthwalo wemfanelo wokuphatha imvelo kanye nemithombo yayo yemvelo ngokulondolozwa nokulondoloza okunomthelela ekusimameni kwemvelo yendawo.
Itholakala ku-150M ukusuka olwandle olukhulu noluhle kakhulu esiqhingini. Uzothola izindawo zokudlela, izikhungo zokuntywila kanye nezitolo ezinkulu.
Sinendawo yokupheka kanye nendawo ye-BBQ.
Izungezwe izihlahla zezithelo nemithi kanye nendawo yokuzalela ufudu.
Sitholakala eSouthwest Bay, Providencia Island - Colombia, lapho ibhishi elikhulu nelihle kunazo zonke esiqhingini likhona futhi lapho iningi lemidlalo yamasiko esiqhingi yenzeka khona, njenge: umjaho wamahhashi, ukugibela amahhashi kanye nokuncintisana ngomkhumbi.
Uzothola izinhlobonhlobo zezindawo zokudlela, izikhungo zokuntywila kanye nezitolo ezinkulu.
Indawo yokuhlala isanda kulungiswa kabusha ngezidingo ezintsha zezivakashi zanamuhla futhi inamasevisi ekhwalithi ephezulu ukuze ikunikeze ukuhlala okujabulisayo nokunethezeka.
Sizungezwe uhlaza oluhle kakhulu lwezithelo nezihlahla zokwelapha kanye nendawo yokuchanyuselwa kofudu, siyinkampani enomthwalo wemfanelo ephethe ukuphathwa okubalulekile kwemvelo kanye nemithombo yayo yemvelo ngokulondolozwa nokulondolozwa okunomthelela ekusimameni kwemvelo yendawo.
Sinombono omuhle kakhulu kanye nendawo ethulile kakhulu yokuphumula kwakho.
I yokuhlala ine sipho izivakashi Plans njenge: VIP sohambo, Snorkeling Tour futhi Ukudoba Tour ukuthi kuzokuvumela ukukwazi nokujabulela emabhishi ezahlukene esiqhingi uhambo yangasese futhi omuhle kakhulu ukunakwa ngezifiso ukuthi ungakwazi ukujabulela nomlingani wakho noma abangani bakho.
Ngiyakumema ukuthi wazi i-Providence, isiqhingi sase-solwandle esinemibala eyisikhombisa.
E-Sunset Life Ecoapartments, uzothola indawo ethule, amagumbi anethezekile, avulekele imvelo anezindawo zokuphumula nezokuhlalisana eningabelana ngazo njengombhangqwana noma njengomndeni.
Inombolo yepholisi: 67961
Hlola ezinye izinketho ezise- Providencia and Santa Catalina Islands namaphethelo